Fitsangatsanganana an-dàlam-piainana iray any New Zealand
Overview Overview NZeTA
Visa mpizahatany any Nouvelle-Zélande
New Zealand eTA Topimaso
Ireo karazana Visa New Zealand
Torolàlana momba ny fangatahana
Tonga amin'ny Cruise Ship
Fanaraha-maso ny sisintany
Hetsika avela ao amin'ny NZeTA
Torohevitra mpizahatany mpitsidika
ETA New Zealand ho an'ny olom-pirenen'i Etazonia
ETA New Zealand ho an'ny olom-pirenena EU
New Zealand eTA ho an'ny olom-pirenena kanadiana
New Zealand eTA ho an'ny olom-pirenena anglisy
New Zealand eTA ho an'ny olom-pirenena frantsay
Firenena misimisy »
Fomba fiaina any Nouvelle-Zélande
Momba ny toetrandro sy ny vola
Fanandramana ny kolontsaina Maori
Fetibe any Nouvelle Zélande
Fikarohana ny Mount Cook
Lahatsoratra misimisy »
Top amoron-tsiraka any Nouvelle Zélande
Tompon'ny peratra traikefa
Toeram-pisakafoanana ao Auckland tsara indrindra
Fanatanjahantena NZ tiako indrindra
Top Adventures any Nouvelle Zélande
Ski any Nouvelle Zélande
Skydiving any Nouvelle Zélande
Vorona & Biby
Fitsangatsanganana an-dàlambe New Zealand
Sakafo tsy manam-paharoa any Nouvelle Zélande
Torolàlana momba ny fizahan-tany any amin'ny Nosy Chatham
24 ora ao Auckland
Inona ny eTA New Zealand?
Mila eTA New Zealand ve aho?
Ho avy amin'ny sambo Cruise?
Mandra-pahoviana no marina ny NZ eTA?
Mandra-pahoviana aho no hijanona?
Fanontaniana rehetra apetraka matetika »
Select LanguageanglisyfrantsayalemainaItalianaAnaranaEspaniolaNorvejianadanoàAnarana iombonanasoedoapoloneyfinoagrikaRosianaSinoa (Notsorina)ArabobiolgaraCatalanSinoa (Nentim-paharazana)Malagasy CroatianCzechFilipinohebreoHindiKoreanaportogeyMalagasy RomanianindonezianinaEndrik'anaranalitoanianinaSerbaSlovakySlovenianinaOkrainianavietnamianaalbaneyEstonianagalisianahongarianaMaltaisThaiTiorkaPersianinaafrikaansMalaySwahiliirlandeyvalesaBelarusianislandeyMasedonianaYiddishArmenianaAzerbaijanibasqueZeorzianaHaitian CreoleUrduBengaliBosniakaCebuanoEsperantoGujaratiHausaHmongIgboJavaneyKannadaKhmerLaoLatinaMaoriMarathiMongolianaNepaliPunjabiSomaliTamilTeluguYorubaZuluMyanmar (Birmana)ChichewaKazakhMalagasyMalayalamSinhalaSesothoSudaneseTajikUzbekAmharicCorsicanFrisianHawaiiKiorda (Kurmanji)KyrgyzLuxembourgishPashtosamoaninaScottish GaelicShonaSindhixhosa
Nisy fahadisoana nitranga, andramo manandrana indray.
ETA (NZETA) ofisialy any New Zealand na Visa any Nouvelle Zélande
Azonao atao ny mahazo Visa ho any Nouvelle-Zélande amin'ny fitsidihanao any Nouvelle-Zélande amin'ny maha mpizahatany anao, mpitsidika anao na amin'ny ankapobeny amin'ny antony hafa, avy amin'ny fanamorana ny tranonao. Mba hahazoana a New Zealand ETA (New Zealand Electronic Travel Authority na NZeTA). Nouvelle Zélande dia manana karazana Visa izay ny tsotra indrindra dia ny New Zealand eTA izay raisina amin'ny alàlan'ny mailaka raha toa ka mampihatra eto amin'ny Forma Application eTA New Zealand ofisialy.
Raha tonga amin'ny Cruise Ship ianao dia azonao atao ny mangataka any New Zealand ETA (New Zealand Electronic Travel Authority na NZeTA) na inona na inona firenenao mety ..
New Zealand Visa dia fepetra takiana mba hidirana any Nouvelle Zélande isaky ny Governemanta any Nouvelle Zélande, azonao atao ny mampiasa ny New Zealand Visa amin'ity tranonkala ho an'ny fijanonana latsaky ny 6 volana. Raha ny marina dia mangataka ianao Visa mpizahatany any Nouvelle-Zélande ho an'ny fijanonana vetivety sy ny fahitana.
Torolàlana momba ny lalana mankany New Zealand
Raha mitady dia fohy kokoa ianao dia tsara kokoa ny mifikitra amina nosy iray. Saingy ity zotram-piaramanidina ity dia hahatafiditra ireo nosy roa mitaky faharetan'ny fotoana lava kokoa.
Tena ilaina ny misoroka ny fitondrana fiara iray avy any amin'ny nosy iray mankany amin'ny iray hafa satria misy vidiny lafo io. Raha tokony ho izany dia afaka mahazo sidina ianao rehefa avy mandehandeha mamaky nosy iray, manidina amin'ny nosy hafa ary manofa fiara any hanohizanao amin'ny dia lavitra ataonao. Saingy, raha mitady hankafy ny volon'ny rivotra ianao amin'ny volonao sy ny hoditrao, ary miala sasatra eo am-pijerena ny onjan-dranomasina, dia tsy handiso fanantenana ny fitsangantsanganana an-tsambo.
Raha mitady ianao ho an'ny traikefa feno amin'ny dia an-dàlana, ny maotera no mety ho anao rehefa afaka miaina eo afovoan'ny natiora ianao ary miaina ny fientanam-po amin'ny fiainana any an'ala. Raha ny fiara fotsiny no mahaliana anao ary te hijanona ao amin'ny fampiononana efitrano fandraisam-bahiny ianao dia fiara manofa no safidinao tsara indrindra!
Tsy maintsy miala sasatra ampy ianao toy ny rehefa mandeha avy any amin'ny tany lavitra mankany Nouvelle-Zélande, dia handoa onjam-peatra amin'ny famataran'n'ny vatanao izany, ary ny fandefasana loatra ny tenanao amin'ny alàlan'ny kapila lava dia mety hanimba ny fahasalamanao.
Aiza no hanombohana?
The South Island dia tsara tarehy sy tsara tarehy kokoa, noho izany, tahiry tsara indrindra amin'ny antsasaky ny dia ataonao ary Auckland no toerana mety indrindra hanombohana miaraka amin'ny toerana mora idirana amin'ny alàlan'ny sidina avy any amin'ny firenena. Fa raha mandeha mandritra ny fararano ianao dia afaka manomboka any Christchurch ary miverina miverina mankany Auckland.
Eo am-pijerena ny fandehananao avy any Auckland, dia manoro hevitra anao aho tsy handany fotoana be amin'ny fizahana tanàna toy ny niaina tao ny natiora no raharaha mahasoa indrindra any Nouvelle Zélande.
Ao Auckland sy ny manodidina, ny toerana tsy maintsy tsidihina dia ny Mt. Edena, morontsiraka amoron-tsiraka andrefana ary ny Sky Tower.
Raha sendra eo aloha ianao dia afaka mandeha sambo kely mankany amin'ireo nosy Waiheke izay misy ny morontsiraka fasika fotsy, ary ny tanimboaloboka dia toerana roa tokony hitsidihanao.
Raha tsy hoe mitady hiala sasatra na hiala sasatra amin'ny trano fandraisam-bahiny misy tanàna mirary ianao, miala eo Auckland mba hahatsapa ny fitoniana sy ny fahamendrehan'ny natiora omen'i New Zealand.
Avy any Auckland, mianatsimo mankany avaratra mandra-pahatonganao any amin'ny farany avaratry ny firenena, Cape Reinga.Ity fiara ity dia hitondra anao eo amin'ny 5 ora sy sasany.
Tsy misy tanàna manodidina ny kapaoty, noho izany aza hadino ny manana tahiry tsara alohan'ny hahatongavany any. The Dia ny dian'ny Te Werahi Beach tsy tokony ho diso anjara ianao rehefa any Cape. Ireo toerana hafa akaikin'ny Cape izay tokony handehananao mankany amin'ny dongon'ny Te Paki, morontsiraka fasika fotsy any Rarawa, ary mandany alina ao amin'ny tobin'i Tapotupotu.
Mandritra ny lalanao avy any Cape dia mijanona eo Whangarei izay toerana mahaliana dia tsara hijerena ny riandrano ary tsara tarehy ny dian-tongotra sy ny toerana manodidina azy. Ny fiara miala amin'ny kapaoty dia hitondra anao eo amin'ny adiny telo sy sasany hahatongavana eto. Farany nitondra fiara nidina nankany amin'ny tanànan'i Puhoi izay toerana fitehirizan-drakitra momba ny boky ny tranomboky ary mivarotra ny dite manitra sy mamirapiratra ny tearoom manan-tantara. Haharitra adiny iray sy sasany avy any Whangarei ianao vao ho tonga eto.
Amporisihina mafy ny mankany amin'ny Saikinosy Coromandel avy eto raha mbola mijanona ao an-tanànan'i Hahei dia toerana tsara hipetrahana ary azo idirana amin'ny toerana hitan'ny manodidina ny faritra. Mandritra ny fotoana dia zahao ny totohondry Katedraly, manaova hetsika an-tsokosoko ao amin'ny Hot Water Beach, ary gaga amin'ny lohasaha Karangahake.
Ny dia mankany Hahei avy any Puhoi dia hitondra anao mandritra ny adiny telo.
Azonao atao ny mijanona ao amin'ny Hahei Bed and Breakfast na Holiday trano ho an'ny traikefa hotely ary raha sendra campervan ianao dia afaka mijanona ao amin'ny Hahei Holiday Resort.
Mandehana mianatsimo mankany Hobbiton izao izay toerana misy lisitra misy siny ho an'ny mpankafy Lord of the Rings, saingy toerana tsy maintsy tsidihina satria rehefa mijanona eo ianao dia afaka mitsidika ny Tendrombohitra Maunganui izay hamela anao ho talanjona ny masoandro. Ny Volkano White Island dia eo akaikin'ity toerana ity ihany koa ary ilay Volkano mihetsika indrindra eto amin'ny firenena, fa satria fitsidihana loza ity toerana ity dia alao antoka fa miatrika izany ianao.
Ny dia an-tongotra avy any Hahei mankany Hobbiton dia hitondra anao mandritra ny adiny telo ary raha te hijanona eto ianao dia afaka mijanona ao amin'ny lavaka fialamboly mahafinaritra fa satria malaza izy ireo dia tsy maintsy mamandrika azy ireo mialoha.
Rehefa mitarika ianao mianatsimo, ny toerananao hitsidika manaraka dia Rotorua izay tontolon'ny kolontsaina afovoan'ny Maori teratany Nouvelle Zélande. Ny farihy geothermal, fahitana ara-kolontsaina an'ny Maori, ny rafting rano fotsy, ary ny fidinana amin'ny ala mena dia mahatonga an'ity toerana tsara indrindra ity izay iarahan'ny kolontsaina sy ny natiora any New Zealand.
Raha tsy te-hijanona ao Hobbiton ianao dia afaka mijanona ao Rotorua ary miaina ny kolontsaina Maori amin'ny endriny tena izy ary miaina ao amin'ny trano fialan-tsasatra satria latsaky ny adiny iray ny elanelany.
Mandeha lavitra kokoa mankany atsimo, mankany ianao Taupo izay ao Waitomo afaka gaga ianao amin'ny fahitana ny lava-bato any Glowworm sy Waitomo ary ny rafting blackwater dia fanatanjahan-tena tadiavina indrindra azonao zahana ao anaty lava-bato.
Ny fitsangatsanganana Tongariro fiampitana dia hanome anao fahitana ireo volkano mihetsika 3 any Nouvelle-Zélande ary satria mandreraka be ny fitsangatsangana dia nanolorana anao ho maka aina amin'ny fitsaharana any Taupo.
Taupo dia adiny iray monja miala an'i Rotorua fa satria misy tranokala marobe hita eto, dia mijanona ao amin'ny T Lake's Hilton Lake sy Haka lodge na hitoby ao amin'ny Lake Taupo Holiday Resort.
Raha te-handany andro vitsivitsy any amin'ny Nosy Avaratra ianao dia afaka mandeha miankandrefana mankany New Plymouth ary tsidiho ny Tendrombohitra Taranaki ary ny Valan-javaboary Mount Egmont. Ireo zavatra izay tsy tokony tsy tokony hianaranao eto dia ny fitetezana ny fiampitana Pouakai sy ny ala Goblin.
Vakio momba ny Maori sy Rotorua - io no toerana tsara indrindra hiainana ny kolontsaina Maori amin'ny endriny madio ary ivon'ny tontolon'ny Maori
Ny lalana mankamin'ny Mt. Taranaki
New Plymouth dia adiny telo sy sasany miala an'i Taupo ary ny toerana hijanonana eto dia ny King and Queen Hotel, Millenium Hotel, Plymouth International, na ny toby ao amin'ny Fitzroy Beach Holiday Park.
Mandehana mankany amin'ny renivohitry ny firenena amin'ny farany Wellington, avy eto dia afaka misafidy ny handray sidina mankany amin'ny Nosy atsimo ianao na amin'ny sambo mitaingina miaraka amin'ny fiaranao mankany amin'ny Nosy izay tonga amin'ny safidinao manokana ary koa ny teti-bolanao.
Lalam-by mankany Wellington
Ny dia an-tongotra avy any New Plymouth mankany Wellington dia lavitra izay maharitra efa ho adiny efatra sy sasany. Raha miala sasatra ianao ary maniry ny hijanona eto dia afaka mijanona ao amin'ny Homestay, Intercontinental na toby ao amin'ny Reserve Reserve, ary Camp Wellington.
Raha manapa-kevitra ny hijanona ianao ary hiala sasatra ary hijery an'i Wellington mandritra ny andro, dia tsidiho ny Mt. Victoria, ny tranombakoka Le Tapa, ary ny lava-bato Weta. Mandehana mankany amin'ny renivohitry ny firenena amin'ny farany Wellington, avy eto dia afaka misafidy ny handray sidina mankany amin'ny Nosy atsimo ianao na amin'ny sambo mitaingina miaraka amin'ny fiaranao mankany amin'ny Nosy izay tonga amin'ny safidinao manokana ary koa ny teti-bolanao.
Raha sendra sidina ianao dia tokony hitondra iray mankany Christchurch satria tsy misy seranam-piaramanidina iraisampirenena handaozanao an'i Nouvelle Zélande ary hamarana ny dia ao Queenstown.
Raha mandray ny sambo avy any Wellington miampita ny Cook Strait ianao dia mahita ny masonao voalohany amin'ny Marlborough Sounds sy ny hatsarany rehefa midina ao amin'ny Picton ianao. Ireo orinasam-piaramanidina lehibe roa mitondra ferry dia ny Interislander sy Bluebridge.
Na dia any Christchurch aza ianao dia ento ny fiaranao ary mandehana mahitsy mankany Picton, satria io no tendro farany avaratry ny Nosy Atsimony.
Ao amin'ny Picton, afaka milomano miaraka amin'ny feso ianao, mandinika ny feo tsara any Marlborough mandeha an-tongotra na amin'ny sambo, bisikileta ary mandehandeha mamaky ny tanimboaloboka ary maka ny sary mahafinaritra avy any Picton mankany Havelock.
Azonao atao ny mijanona ao amin'ny Picton ao amin'ny Picton B sy B, ao amin'ny Picton Beachcomber Inn, ary mitoby ao amin'ny Picton Campervan Park na Alexanders Holiday Park.
Mianara momba izany traikefa nahafinaritra any Nouvelle Zélande tsy maintsy atolotra.
Mankanesa any Abel Tasman National Park izay zaridainam-pirenena kely indrindra any Nouvelle-Zélande, izay tokony handehananao mankany amoron-tsiraka Wharariki, fitsangatsanganana mankany Wainui fianjerana, ary ireo morontsiraka fotsy sy fasika tsara tarehy eo amin'ny valan-javaboary dia fantatra amin'ny fanatanjahantena anaty rano ho an'ny mpitsangatsangana ao aminao!
Fiara kely tsara tarehy lavitra anao no hahita Valan-javaboary Nelson Lakes, fantatra amin'ny fiakarana an-tampony sy trano bongo any akaikin'ny farihy toa an'i Rotoiti sy Angelus.
Azonao atao ny mitsidika ireo valan-javaboary roa ireo rehefa mijanona ao amin'ny Picton satria ny kariera Abel Tasman dia adiny roa sy sasany ary ny Nelson Lakes Park dia adiny iray sy sasany.
Ny fidinana atsimo dia azonao atao ny mandeha miankandrefana na miantsinanana, ny tolo-kevitro dia ny hitondra fiara lavitra kokoa sy somary sarotra any amin'ny morontsiraka andrefana satria mendrika ny dia ny fomba fijery sy ny toerana.
Raha manaraka ny làlana atsinanana ianao dia tsy maintsy mijanona Kaikoura satria io no toerana tsara indrindra hijerena trozona, milomano miaraka amin'ireo feso sy ny sisa Christchurch, ny Saikinosy Banks sy Akaroa dia toerana mahafinaritra roa hafa.
Azonao atao ny manamarina eto ny Ireo karazana Visa New Zealand mba hahafahanao mandray fanapahan-kevitra tsara momba ny visa fidirana any Nouvelle-Zélande, ny Visa vao haingana indrindra sy soso-kevitra dia ny New Zealand eTA (New Zealand Electronic Travel Authority na NZETA), azafady mba zahao ny fahazoana alalana anao navoakan'ny Governemanta any Nouvelle Zélande natokana ho an'ny fahafaham-ponao amin'ity tranonkala
Ny fomba fijery eny amin'ny Akaroa
Christchurch dia simba tanteraka tamin'ny horohoron-tany ary tsy nanolotra zavatra be dia be mba hahafahanao mijanona eto mba hiala sasatra amin'ny fijanonana ao amin'ny Chapter Stay sy Greenwood. Ho an'ny lasy, azonao atao ny mijanona ao amin'ny tobin'ny Skotisma Omaka na valan-javaboary fialantsiny avaratra atsimo.
Raha sendra ilay lalana sarotra kokoa ianao, nefa manome valisoa ny morontsiraka andrefana dia hijanona aloha ianao Punakaiki, ity toerana ity no vavahady mankamin'ny Valan-javaboary Paparoa izay hijoroanao ho vavolombelona amin'ireo vatolampy pancake malaza any Nouvelle-Zélande izay tokony hanome anao vibe ny maha-ao amin'ny Jurassic Park iray.
Punakaiki dia lalana adiny efatra sy sasany miala an'i Picton ary hanasatra anao, hijanona eto Punakaiki B sy B, na hitoby ao amin'ny tobin'ny Punakaiki Beach.
Avy eo dia tokony hitondra fiara mankany amin'ny Valan-javaboary Arthur's Pass izay misy ny fiakarana roa tokony ho tsidihinao dia ny làlan'i Bealy Spur izay manome fahitana mahavariana amin'ny tampon-tendrombohitra sy ny reniranon'i Waimakariri ao aoriana Tampon'ny Avalanche izay ny dia malaza indrindra ao amin'ny valan-javaboary dia sarotra ny mamakivaky saingy manome fomba fijery tsara avy any an-tampon'ny tamponanan'ny tampon'isa. Ireo toerana hafa hitsidihana avy eto dia Waterfall Punchbowl an'ny Devoly sy ny Farihin'i Pearson.
Làlana mankamin'ny Valan-javaboary Pass Pass
The glaciers roa Franz Josef sy Fox no antony mahatonga ny morontsiraka andrefana ny làlana tokony halehanao, eto dia azonao atao ny mandeha mitsangatsangana any amin'ny lohasaha glacier, mitsangatsangana mankany amin'ny farihy Matheson, ary ny lalan'i Alex Knob izay miafara amin'ny traikefa tsara tarehy miaraka amin'ny fahitana mahafinaritra ny vongan-dranomandry.
Azonao atao ny mitsidika ny Arthur's Pass National Park mandritra ny fijanonanao any Punakaiki satria adiny iray sy sasany eo ho eo ary ny glaciers dia adiny roa sy sasany fotsiny.
Amin'izay fotoana izay dia samy afaka mankany amin'ny Park Cook National Park izay misy ny tampon'ny havoana avo indrindra any Nouvelle Zélande ny zotra rehetra, miaraka amin'ny fahitana mahatalanjona atolotra avy amin'ireo diany maro karazana, izy io koa dia trano misy ny tahiry lanitra maizina lehibe indrindra eto an-tany sy ny rano mangarahara ny Farihy Tekapo eny an-dàlana dia ataovy mendrika isan-tsegondra ity fiara ity.
Valan-javaboary Mount Cook dia manodidina ny telo ora miala an'i Punakaiki ary adiny telo sy sasany miala an'i Christchurch. Mijanona any amin'ny Aoraki Pine Lodge na Hermitage Hotel Mount Cook ary mitoby eo amin'ny tobin'ny havoana Whitehorse.
Lalam-pirenena 80 (Mount Cook Road)
Avy any dia mandeha mankany wanaka aiza ny rano madio mangatsiaka amin'ny Farihy Hawea no hahatonga anao hahatsiaro milamina sy ny Mandeha ireo dobo manga dia hiantoka anao ho tony sy ho tony raha vantany vao vita amin'ny làlana. Ny fitsangantsanganana an-tampon'ny Roy ao Wanaka dia malaza satria manenika ny fitsangatsangana ny olona hijery ny hazo Wanaka izay hazo tokana ao anaty ranomasina.
Ny fandehanana any an-tendrombohitra Cook mankany Wanaka dia haharitra adiny roa sy sasany. Azonao atao ny mijanona eto amin'ny trano bongo Willbrook na hotely Edgewater ary mitoby ao amin'ny Mt. Aspiring Holiday Park izay misy fitsangatsanganana mahafinaritra sy toerana mahafinaritra mahafinaritra azo jerena.
Mandehana mankany amin'ny toerana manintona mpizahatany tsara indrindra any Nouvelle Zélande izay Milford Sound sy feo mampiahiahy izay azonao atao amin'ny fitsangatsanganana mankany amin'ny tampon'ny fihaonana an-tampon'ny Key, akaikin'izay ny Fjordland National Park trano fonenan'ireo be mpampiasa indrindra any Nouvelle Zélande.
Ny tsara indrindra dia ny mijanona ao amin'ny Fjordland National Park izay maharitra adiny telo miala an'i Wanaka. Azonao atao ny mijanona ao amin'ny Kingston Hotel, Lakefront Lodge, ary mitoby ao amin'ny Getaway Holiday Park na Lakeview Kiwi Holiday Park.
Farany, mitodiha any Queenstown izay ahafahanao mandeha mitsangatsangana eny an-tampon'ny tanàna tendrombohitra ary mitsidika ny farihy Wakatipu. Manomboka eto dia afaka mandray sidina mankany amin'ny toerana itodiana any Aostralia sy Nouvelle Zélande ianao ary miverina mody miaraka amin'ny fahatsiarovana be dia be.
Hamarino fa efa nohamarininao ilay fahazoana mandray anjara amin'ny eTA New Zealand anao. Raha avy amin'ny a ianao Firenena Visa Waiver avy eo azonao atao ny mangataka eTA na inona na inona ny fomba fitetezam-paritany (Air / Cruise). Olom-pirenena Etazonia, Teratany Kanadiana, Teratany Alemanina, ary Olom-pirenena anglisy afaka mangataka amin'ny Internet ho an'ny New Zealand eTA. Ny mponin'i United Kingdom dia afaka mijanona ao amin'ny eTA New Zealand mandritra ny 6 volana raha ny hafa kosa mandritra ny 90 andro.
Azafady mba mangataka amin'ny New Zealand eTA 72 ora mialoha ny sidinao. Azonao atao ny mandray ny New Zealand eTA toy ny visa any Nouvelle-Zélande mandritra ny 6 volana maharitra. Contact Fanohanan'ny mpanjifa Visa any Nouvelle Zélande na birao fanampiana raha misy fanazavana momba ny dianao.
APPLY APPLICATION NZeTA
Ny fampahalalana momba anao manokana dia nohamafisin'ny rindrambaiko Secure Sockets Layer (SSL)
ZEALANDA vaovao eTA
ZEALANDA vaovao eTA FIKAMBANANA
Forme APPLICATION NZeTA
TANINDRAZANA MANDRAKARIVA NZeTA
NY TANINDRAZANA WAIVER NZeTA VISA
Fampahalalana momba ny mpitsidika an'i NZeTA
Torohevitra momba ny fangatahana
FANAMARIHANA NY fiarovana ny sisintany
Hetsika nahazoana alalana tamin'i NZeTA
AVY AMIN'NY Sambo CRUISE
VAHITORY FIASA VOALOHANY
FIAINANA ZEALANA Vaovao
INDRINDRA SY INFO INDRINDRA
TASTE CULTURE MAORI
FESTIVALS IN ZEALAND NEW
TSY MAINTSY HITA NY QUEENSTOWN
Sakafo ZEALAND vaovao tsy manam-paharoa
Toro lalana nosy CHATHAM
TSY MAINTSY MAHITA RANO
TORON-TOERANA TOP 10
TOMPON'NY FIAINANA TAMIN'NY RINGA
RESTAURANTSA AUCKLAND TSARA
OLOM-PIAINANA TENA TIA
TOP ADVENTURES IN NZ
MIALA AMIN'NY ZEALAND NEW
SKYDIVING ATO NOU-ZEALAND
VATO & biby
TRIPS BAROTRA ZEALAND Vaovao
PARIT NATIONAL ABEL TASMAN
PARK NATIONAL PARK
24 ANDRO AO AUCKLAND
FIVAROTANA NY FANDAMINANA
Misorata anarana amin'ny NZeTA
© copyright an'ny www.new-zealand-visa.co.nz
Fialana andraikitra: New Zealand eTA / Visa navoakan'ity tranokala ara-barotra ity dia ampiharina mivantana ao amin'ny tranonkalan'ny governemanta New Zealand Immigration (www.immigration.govt.nz). Manome fanampiana ho an'ireo Travel Agents sy mpandeha manerana an'izao tontolo izao izahay. Ny governemanta New Zealand dia tsy nanendry an'ity tranonkala ity mivantana, na ankolaka na ankolaka. Ny sarany matihanina dia takiana amin'ny serivisinay ho an'ireo izay mangataka eto amin'ity tranonkala ity. Ny fampahalalana fanampiny momba ny sarany dia misy ao aminay momba anay page.